IPirates imincile ngabadlali abamqoka | News24
Durban - Ubamba uyayeka umqeqeshi we-Orlando Pirates njengoba kuvela ukuthi umincile ngabadlali bakhe abamqoka. IBucs izobhekana neLamontville Golden Arrows koweTelkom Knockout ngoMgqibelo ngo-15:00 ePrincess Magogo Stadium, KwaMashu.
UMilutin "Micho" Sredojevic ocija iBucs kuvele ukuthi ubamba uyayeka njengoba uMthokozisi Dube odlala emuva, uMusa Nyatama oyibamba esiswini noThamsanqa "Gandaganda" Gabuza ongumgadli, benokuthinteka.
Kuthiwa sekulindelwe ukuba bahlolwe okokugcina ngodokotela kusasa ngoLwesihlanu ngaphambi kokuba kunqunywe ukuthi bazodlala yini, kubika ILANGA.
"Uma uya emdlalweni omkhulu njengalona udinga bonke abadlali bakho abawumgogodla. Ngimincile nje ukuthi kufike usuku lomdlalo laba badlali sebesesimweni esigculisayo.
"Amalungiselelo ahamba kahle, siwulindele umdlalo we-Arrows," kusho uSredojevic.
UClinton Larsen ocija i-Arrows uthi izinto zihamba kahle kwezakhe futhi akanalo uvalo ngalo mdlalo wePirates.
"Sesigijime imidlalo engu-9 singahlulwa, lokho kwenza abafana bami bangabi nalo uvalo lokubhekana nanoma yiyiphi ikilabhu abaqhathwe nayo. Nalo mdlalo wePirates siwulungiselele ngendlela efanele, wonke umuntu uwulangazelele.
"Engikuqaphele ngayo ukuthi ihluke kakhulu kunangesizini eyedlule, iyashesha uma ihlasela kanti ngeyedlule ibithatha isikhathi sayo ukuhlasela.
"Kodwa-ke izofika siyihlomele iPirates lokho kangikungabazi. Okuhle nje wukuthi kungase kubuye uNduduzo Sibiya noTrevor Mathiane abebelimele," kusho uLarsen.